‘छक्का पञ्जा २’ र ‘मेरो पैसा खै ?’ प्रदर्शन हुने भो एकैसाथ .... – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘छक्का पञ्जा २’ र ‘मेरो पैसा खै ?’ प्रदर्शन हुने भो एकैसाथ ….
September 20, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood 0
असोज ११ गते गते छाक्का पन्जा २ सोलो रिलिज हुन नपाउने भयो । निकै नै प्रतिक्षित यस मिती मा छाक्का पन्जा २ सँगै मेरो पैसा खै पनि रिलिज हुने तय भएको छ । यतिबेला छक्का पञ्जा २ टिम मोफसल प्रचार प्रसारमा छ ।
मंगलम सँग सँगै रिलिज हुने हल्ला ले बजार तातिएको थियो तर दीपक राज गिरी र छबी वझाले सहमती गरेर मंगलम को मिती सर्यो । फिल्म वितरणको जिम्मा लिएका सुनिल मानन्धरले असोज ११ गते ‘मेरो पैसा खै ?’ प्रदर्शनमा ल्याउने सम्झौता निर्माता राणासँग भैसकेको बताए । उनले यस मितिबाट फिल्म नसर्ने समेत अडान लिएका छन ।अब के मेरो पैसाको पनि मिती सार्लान त ? यो थाहा पाउनका लागि केही दिन प्रतिक्षा गर्नुको बिकल्प छैन ।
कमेडी जनराको फिल्ममा सौगात मल्ल, रबिन तामांग , छुल्ठिम गुरुगं, बुद्धि तामांग, बर्षा राउत लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । बलिउडका निर्देशक विवेक शर्माले बिचबाटै फिल्म निर्देशनबाट हात झिकेपछि निर्माता राणाले फिल्म मेरो पैसा खै को निर्देशन गरेका थिए ।